Tsika dzeCanada nemitambo yeCanada, unozviziva here? | Absolut Kufamba
Tsika nemhemberero dzeCanada
Susana Maria Urbano Mateos | | Kanadha
Canada inyika inozivikanwa pasi rese nekuda kwekuve tsika dzakasiyana nyika iine huwandu hwakawanda hwetsika hunokanganisa hunosimbisa kusiyana kwetsika nemagariro enzvimbo ino yepasi. Vanodada nekuzivikanwa kwakasiyana, maCanada vanomira mune chero nyika yavanoshanyira, kwete chete nekuda kwekuzvitutumadza kuva vagari venyika yechipiri pakukura pasirese (maererano nenzvimbo yakazara), asiwo nekuda kwetsika nemhemberero uko kune nzvimbo. yemunhu wese. Unoziva here iyo iyo Canada tsika?
Chokwadi kana tikabvunza mumwe munhu anogara munyika ino, ndeipi chikamu chakanakisa chekuve weCanada, zvichave zvakaoma kwavari kuti vagare nenharaunda imwe chete yehupenyu hwavo. Hatisi kutarisana chete vanhu vane hushamwari hwakanyanya, asi achinyatsoziva nezve zvakasikwa uye pasina mafungidziro anogona kugadzira nzvimbo dzevanhu vakasiyana, chero kwavanobva.
Rudzi urwu rwemagariro rwakaita tsika yarwo mucherechedzo wevamwe vazhinji pavanogadzira mitambo yemitauro yakawanda iyo yave musangano wezviuru nezviuru zvevanhu gore rega rega. Izvo zvakakonzerawo shanduko yetsika dzese dzatinogona kuwana munyika ino, zvichiita kuti vanhu vese vanzwe vari chikamu chenyika, zvisinei nekwavakazvarirwa.
1 Canada tsika
1.1 Tsika dzakajairika dzevanhu muCanada
2 Tsika mitambo muCanada
2.1 Mutambo Wepasi Pose "Celtic Colors"
2.2 Mutambo "Kungoseka" kuMontreal
2.3 Mutambo weJazz muMontreal
2.4 Quebec Nguva yechando Carnival
2.5 Edmonton Folk Music Festival
2.6 Iyo Calgary Yakatsika
2.7 "Symphony yeMoto" muguta reVancouver
3 Mamwe mazororo eCanada
Chinyakare cheCanada chakakanganiswa zvakanyanya nevakakunda vakasiyana vakauya munyika dzavo: french uye british. Vanokunda ava vakawedzera zvinofungwa netsika dzavo netsika dzevanhu vemunyika iyi.
Kune huwandu hukuru hwevatorwa, uye vemarudzi akasiyana, kune matunhu mazhinji eCanada ane akasiyana maratidziro kumarudzi akasiyana akauya uye akanzwa kudiwa zvekuti vakakwanisa kudaidza Canada "imba yangu".
Mhedzisiro yekubatanidzwa kwetsika nemagariro, yaita kuti Canada ive nyika ine hunhu hwakasiyana-siyana senyika inogamuchirwa, ichiva imwe yenzvimbo dzinodiwa kutamira kune vanhu vanobva munyika dzakasiyana uye tsika dzakatenderedza pasirese.
Tsika dzakajairika dzevanhu muCanada
Siya shangu dzako pamusuwo wemba yemumwe munhu watinoshanyira kana mumba medu uye uye, tichifamba mairi, mumasokisi kana mamwe marudzi eshangu dzisina kubva mumugwagwa.
Kana isu takakokwa kuchirairo kana chiitiko kumba kwemumwe munhu, isu tinofanirwa kuunza maruva, waini yemhando yepamusoro kana chokoreti, sechiratidzo chekutenda uye mutsa.
Kana isu tatanga hurukuro nemumwe munhu, isu tinofanirwa kuyedza kubata mumwe munhu zvishoma sezvinobvira, kuremekedza nzvimbo yavo pachavo sechiratidzo chekuremekedza.
Tsika mitambo muCanada
Canada ndiyo nzvimbo yekuzvarwa yemitambo yakati wandei inogona kunakidzwa munzvimbo dzakasiyana dzenyika. Mimwe yemhemberero idzi dzinozivikanwa pakati pevashanyi venyika uye nehuwandu hwayo, ndosaka zvakakosha kuziva mhemberero huru, nemisi yadzo, kuronga magariro edu.
Kune mhemberero dzakawanda idzo, kunyangwe dzinoitirwa muCanada, dzakagadzira nzira yekuchengeta mhemberero dzakaitwa mune dzimwe nyika netsika. Kushanyira mhemberero dzese dzinogona kuitika munyika ino kuchaita kuti pfungwa dzedu dzione nekunakidzwa netsika zvisati zvamboitika. Kana taifanira kusarudza iyo mitambo yekushanyira muCanada, haufanire kupotsa chero yeanotevera:
Mutambo Wepasi Pose "Celtic Colors"
Takatarisana nechimwe chezviitiko zvinozivikanwa zvinoitika muCanada. Vanhu vazhinji, vese veko uye vashanyi, havadi kupotsa kuenda kumutambo uyu. Kazhinji, zvinoitika mukati memwedzi waGumiguru gore rega rega, pachiwi Cape Breton kwemazuva mapfumbamwe. Kuburikidza neCeltic tsika, iwo mutambo watinosvika pakuziva iyi tsika zvakanyanya sezvinobvira muNorth America.
Mutambo "Kungoseka" kuMontreal
Chero Chikunguru, mu Montreal guta, uyu mutambo unoenderana nekomiyamu uye monologue inopembererwa. Iwo mutambo wakakwana wekuenda nemhuri yedu neshamwari kuti unakirwe kwezuva rese mune imwe nzira.
Mumigwagwa yeguta rino rakanaka, tinogona kunakidzwa nevanhu vakasiyana avo vanozotiseka nguva dzese: ingave iri kutaura majee, kuita monologues, mashiripiti manomano, nezvimwe.
Mutambo weJazz muMontreal
Kana iwe uri muteveri we Mumhanzi weJazz, uyu mutambo izuva rako rakanaka munharaunda yeCanada. Munguva yemwedzi waChikunguru, muguta reMontreal, mutambo unoitwa pamwe nevaimbi vanopfuura zviuru zvitatu vechijairi chenyika vanobva munyika dzinopfuura makumi matatu, vakasiya misha yavo chete nekuda kwemutambo uyu. Tinogona kunakidzwa ese emahara ekunze makonati uye akabhadharwa makonzati mune akasiyana horo.
Quebec Nguva yechando Carnival
Takatarisana nemutambo unoitika mu Quebec Guta kubvira 1955 musoni nemhuka yako wega. Kukwezva kwaro kukuru ndeyemasikati nehusiku mafaro ayo nhengo dzevagari uye yavo mascot vanotora chikamu. Tinogona zvakare kuwana akasiyana mashoo uye zviitiko mukati meguta rinoitika pasi perwizi rwakanyanya, nekuti zvinowanzoitika pakupera kwaNdira. Ndokusaka, semuenzaniso, chimwe chezviitiko chine vateveri vazhinji panguva yemutambo uyu chakapetwa uye nhangemutange yechando.
Unoda iyo mimhanzi yevanhu? Vhiki rechipiri ra Nyamavhuvhu muEdmonton une mutambo wakakumirira. Ichi chiitiko chemimhanzi chinotora mazuva mana nemaartist emhando dzakawanda (vanhu, Celtic, vhangeri, nezvimwewo), vanobatanidza matambiro avo pakati pechikamu chikuru uye nhanho dzeavo maartist kana matanho ayo maartist akasiyana anoshanda pamwe.
Mangwanani, tinogona kunakirwa akasiyana mashopu nemakonzati ane hukama nemhando dzakasiyana dzechikafu, hunyanzvi, zvitoro zveCD uye zvigadzirwa kubva kune akasiyana maartist, nezvimwe Izvo zvinowanzoitika munzvimbo imwechete, iine anopfuura gumi nemaviri emavhiki apfuura mukati memakore anopfuura makumi maviri anga achiitika.
Iyo Calgary Yakatsika
Inozivikanwa se "Pasi Rakanyanya Kunze Kwekunze Ratidza”Yakaitirwa muguta reCalgary, panenge pakati paChikunguru, kwemazuva gumi, ichiva mumwe wemhemberero dzakarebesa dzakaitirwa muCanada.
Munguva yemutambo uyu isu tinogona kunakidzwa nengano rodeos pamusoro penzombe nemabhiza anozivikanwa pasirese, dzakasiyana tastings, makonzati, zvinokwezva, ngoro nhangemutange, nezvimwe. Izvo zvinowanzoitika kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reCalgary, uko vanhu vanopfuura mazana matatu nemakumi mashanu vanouya uye vanonakidzwa naro kurarama uye, kuburikidza neterevhizheni, vamwe vanhu mamiriyoni maviri.
"Symphony yeMoto" muguta reVancouver
Kana tikashanya Vancouver guta, isu tichawana mutambo unoitika gore rega riine mafireworks kwemazuva akati wandei. Wazova makwikwi epasi rese nenzira "yeushamwari" pakati penzvimbo dzakasiyana dzepasi, inopembererwa nenzira yekuti mafirework anoputika nenzira yakakwenenzverwa kune mutinhimira wemumhanzi wakasarudzwa.
Inofungidzirwa kuti ndiyo makwikwi makuru epasi rose emoto anowanzoitwa zhizha rega rega muguta reVancouver. Mutambo unotarisirwa kwazvo nevose vashanyi nevagari vemo uye kuti, gore rega rega rinopfuura, rinowedzera mukuzivikanwa uye huwandu hwevanopinda.
Mamwe mazororo eCanada
ari zororo renyika reCanada vanopembererwa: Ndira 1 yakafanana neNew Year Day Zuva munzvimbo zhinji dzenyika, Chivabvu 20 Zuva raMambokadzi Victoria. Zuva rakakosha kwazvo pakarenda ndiChikunguru 1, Zuva reNyika reCanada. Musi waGunyana 1 iyo Basa rebato, Gumiguru 14 ndiyo zuva rekutenda uye munaNovember 1 iyo Zuva revafi. Kisimusi muna Zvita 25 uye zuva rinotevera rinopembererwa mabiko eSan Esteban.
Zuva rekutanga regore muna Vancouver, zvaitwa "Kushambira neWhite Bears". Inoshambira 274 metres paavhareji tembiricha yemadhigirii matanhatu. Mukati memhemberero imwe chete mu mambokadzi victoria park chiitiko chinoitirwa panokandwa mafirework husiku hwese.
En Quebec, Mumwedzi waFebruary macarnival anoitika. Kwemazuva gumi nerimwe guta inozara nevanhu vanoenda kumapati usiku. Ivo vanopinda mumakwikwi echando echivezi, nhangemutange dzechikepe parwizi rweSt. Lawrence, uye mimwe mitambo yakawanda ine chekuita nechando. Zvakare munaKukadzi asi mune iyo Rideau Canal, in Ottawa, chikuru munyika, iyo Nguva yechando. Ichi chiratidziro chinotangira kubva kubhaluni kutasva kuenda kune ice ballet.
Kana panguva iyoyo wave padhuze ne Niagara Usamire kushanyira la Mazambiringa neWin Fair kana iyo Royal Toronto Zvekurima Fair.
Munguva yemwaka wematsutso kunoitika mutambo unopembererwa munzvimbo zhinji pasi pano: iyo Oktoberfests. Maguta akapfekedzwa semadhorobha ekare emisha uye ngano dzemuno dzinonzwika kwese kwese.
Kana iwe uchida mimhanzi muVancouver kubva munaJune 21 kusvika 30 pane mutambo wejazi wepagore uye mumwe weakanyanya kukosha pasi rose muMontreal kubva munaJune 27 kusvika Chikunguru 7, nevatambi 1600 vanobva kuCanada nemitambo mazana matatu nemakumi mashanu.
Mazororo ezvese zvido. Kana iwe uri kufamba kuenda kuCanada tarisa karenda iyo yauchazonyatso kukwanisa kutora chikamu mune yemuno pati uye dzidza zvakawanda nezvetsika dzenzvimbo ino yakanaka.
Sezvauri kuona, Kanadha ine mukuwedzera kwayo a zvakasiyana-siyana de pueblos y tsika izvo zvinoramba zvisina kugadzikana mazhinji avo tsika y mhemberero. Ndeipi yetsika dzese dzeCanada iwe yaunonamatira nayo?
CitiesTsikatsika nemagariroEnda kunzvimboMapatiTurismofamba
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika nemhemberero dzeCanada
Canada ndibaba vangu asi handikwanise kuenda nekuti handina vhiza uye nemutemo weArizona handikugumbure asi nyika ndeya munhu wese
chokwadi canada yakanaka
daniel ayala akadaro
Kunze kwekunaka, runonyanya kunyanya kugamuchira vaeni nerupo rwevanhu varo, kuchengetedza nharaunda uye nebasa rehurumende kuchengetedza zviwanikwa zvehupenyu hwevanhu. Rarama kwenguva refu Canada!
Pindura kuna daniel ayala
Pindura kune lesli
Ndicho chinhu chinotonhorera kupfuura chandanga ndisati ndamboona, chingave bhakano kubva kuColombia kushambira nemapere ane polar uye kubuda muhupenyu hwezuva nezuva uye kuenda kunonakidzwa neColombia inewo zvikamu zvayo zvakanaka asi isu tinoda mabheya polar.
zvive zvakanaka pane zvandanyora
Pindura kuna sa
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Consuelo uye ndinoda kuziva Canada nekuti ndinofunga yakanaka kwazvo.Ndinobva kuColombia.Chandinoda nezvenyika ino mamiriro ekunze ……. 🙂
Izvo zvine basa kwandiri zvaunotaura, nyaradzo
Mhoro, yakanaka kwazvo posvo.
Ini ndaida kukubvunza iwe: gore 1 Mbudzi izororo muCanada? Ini ndatoona kuti haisi muUSA, asi handina chokwadi chekuti izuva rinoshanda here muCanada.
Patios de Córdoba, runako rwetsika
Terracotta Warriors, China yekupedzisira chakavanzika chikuru